Tag: oku vidiyo | Martech Zone
Kpido: Oku vidiyo
Mgbe mkpọchi mere ka ihe omume bụrụ nke mebere, ọ mekwara ka nnabata ihe omume ịntanetị mee ngwa ngwa. Nke a dị mkpa ka ụlọ ọrụ mata. Ọ bụ ezie na ihe omume mmadụ ga - alaghachi dị ka ọwa ahịa na azụmaahịa dị egwu maka ụlọ ọrụ, ọ ga - abụkwa na mmemme ihe omume ga - anọgide na - anabata ma bụrụkwa ọwa dị mkpa. Ọ bụ ezie na usoro nzukọ nzukọ a na-ahụkarị na-enye ngwa ọrụ enwere ike itinye n'ọrụ iji nwee otu nzukọ ma ọ bụ webinars, ngwaọrụ ndị ahụ na-ada
Acquire.io: Otu Njikọ Aka na Ndị Ahịa
Fraịde, Ọgọstụ 7, 2020 Fraịde, Ọgọstụ 7, 2020 Ọnọdụ Mehta
Ndị ahịa bụ oke mkpa azụmaahịa ọ bụla. N'agbanyeghị nke ahụ, naanị ụlọ ọrụ ole na ole nwere ike ịnagide ihe ha na-achọ, na-ahapụ nnukwu ohere maka ụlọ ọrụ ndị dị njikere itinye ego na ahụmịhe ndị ahịa ma melite oke ahịa ha. N’amaghi anya, njikwa CX abụrụla ihe kachasị mkpa maka ndị isi azụmaahịa na-ewepu akụnụba na-aba ụba iji mee ya. Agbanyeghị, na enweghị ezigbo teknụzụ, ọ gaghị ekwe omume iji nweta ya
Mkparịta ụka vidiyo na-aga Mainstream Maka Weebụsaịtị Weebụ na nyiwe Ecommerce
Wednesday, September 26, 2018 Satọde, Febụwarị 13, 2021 Douglas Karr
Salesforce ebipụtala nkọwa zuru ezu na infographic na mmetụta na omume kacha mma nke nkata vidiyo maka ọrụ ndị ahịa. Onye ọrụ nlekọta ndị ahịa a na-agakọ mma nke nkata ndụ na oku ekwentị yana mmetụ onwe onye nke vidiyo. Site na bandwidth buru ibu, 5G na-agba gburugburu n'akụkụ, yana nkwalite dị ukwuu na teknụzụ nkwukọrịta vidiyo, obi abụọ adịghị ya na nkata vidiyo ga-eto na mmetụta. Gartner na-eme atụmatụ na ihe karịrị 100 nke